‘म काम गर्छु झूठको खेती गर्दिन’ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘म काम गर्छु झूठको खेती गर्दिन’
प्रदेश ‘ख’ सोलुखुम्बू नेकपा एमालेः बुद्धिकुमार राजभण्डारी
चुनावी मैदानमा मतदाताकहाँ पुग्दा के पाउनु भयो ?
मैले मेरो क्षेत्र भित्र चुनावी कार्यक्रम लिएर जाँदा म माथि अत्यन्तै ठुलो आशा र भरोसा रहेको पाएँ । जनताको उत्साह हेर्दा म मेरो विपक्षी भन्दा दोव्बर मतका साथ बिजय हुन्छु भन्ने विश्वास जागेर आयो ।
तपाइको बिजय कसरी सम्भव हुन्छ ?
विगतमा नेकपा एमालेले जनताको सामू गरेका काम र एमालेमाथिको भरोसा प्रमुख कारण हो । त्यसका साथै वाम गठबन्धन, वाम गठबन्धन सँगसँगै जनताले पुराना पुष्तालाई हटाउन चाहेको देखिन्छ । जनताको पक्षमा काम नगर्ने र आफ्नो स्वार्थका निम्ती, पर्यटकीय नेता बन्न चहानेलाई जनता स्वीकार्ने पक्षमा छैनन । हिजो कांग्रेस र राप्रपामा रहेका नेताहरु पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुको पनि सहयोग रहेको छ ।
बाम गठबन्धनका कारण अरुलाई फाइदा भयो भन्ने आँकलन गर्छन नि विश्लेषकहरु ?
यो कुरा अपवाह हो । म कुरामा होइन काममा विश्वास गर्ने मानिस हुँ । मलाई लाग्छ वाम गठबन्धनले जनतालाई घाटा नभएर फाइदा हुन्छ । किन भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु बिपक्षबाट लामो समय पीडित भएका छन भने जनतापनि काग्रेंसले विगतमा गरेका कुकृत्र्यका कारण आजित भैसकेका छन, जनता परिवर्तन चाहन्छन त्यसकारण पनि विपक्षीहरुले अनावश्यक हल्ला फिजाएका हुन भ्रममा नपर्न म तपाईको मिडिया मार्फत सोलुखुम्बु जिल्लावासीलाई आग्रह गर्दछु ।
तपाइले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई कसरी लिनु भएको छ ?
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु भएको मेरो प्रदेशमा आङ गेलु शेर्पा टुरिष्ट नेता हो । उहाँ काठमाडौ बस्न रुचाउनु हुन्छ । म जिल्लामा बसेर जनताको काममा लागिरहेको मानिस हूँ ।
तपाइले त शेर्पाहरु अधिनायकवादी हुन भनेर आरोप लगाउनु भयो रे ?
हैन, हैन, मेरो शेर्पा साथीभाइ छन्, आमाबुवा दिदिवहिनीहरु हुनुहुन्छ, हरेक शेर्पाहरु मेरो नातेदार अनि आफन्तहरु छन् । उहाँहरुसँग मेरो सम्बन्ध प्रगाढ छ । अनि शेर्पा अधिनायकवाद हुन्छ ? कुनै पनि समुदाय अधिनायकवादी हुन सक्दैन ? त्यो सम्भव नै छैन । ब्यक्ति अधिनायकवाद हुनसक्छ तर समुदाय अधिनायक बाद हुनसक्दैन । मैले बोलेको कुरा युट्युवमा राखिएको छ रे । मैले बोलेको कुरा त्यहाँ प्रस्ट छ । मैले भन्न खोजेको शेर्पाको जातिय राजनीती गर्ने, शेर्पालाई जातिय राजनीती गराएर शेर्पा भित्रको म जस्तो ठुलो शेर्पा कोहि छैन भन्ने अनि अरु भएका शेर्पाहरुलाई आफु भन्दा तल राख्दै समाप्त पार्न खोज्ने र आफु चाँहि शेर्पा जातीहरुको एकल अधिनायकवादीको रुपमा अघि बढ्न गेलु जि खोजेको मेरो तर्क हो । अनि गेलु जिको आवाजलाई कटाएर मेरो आवाजलाई मात्र राखेर गलत प्रचार गर्नु आपत्तिको कुरा भएन । त्यसैले आम समुदायहरुले यस्तो गलत प्रचारवाजीको पछाडी लाग्नु हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यस्तो प्रचार गर्ने सबै भिडियो राख्न म चुनौति दिन्छु । यदि मैले त्यो भन्ने हो भने मैले जिल्ला बस्नुको औचित्य छैन । म आफुलाई शेर्पा समुदायमा बसेको अनुभुति गर्छु । त्यसकारण त्यो गलत हो ।
तपाईले शेर्पा समुदाय प्रति नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु भा छ कि ?
कुनै हातलमा त्यस्तो होइन । तपाईलाई म यहाँ निबेदन गरुँ, हाम्रो पार्टीमा सबैभन्दा पुराना कम्युनिष्ट नेताहरुमा आङ्ङिमा जि, झलक जिलाई चिनिन्छ । के उहाँहरु शेर्पा होइन ? उहाँहरु गेलु जि भन्दा भिन्न शेर्पा हो ? त्यसैगरि आङदामी जि, सोनाम जि, अनि स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित शेर्पाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु शेर्पा होइन ? हाम्रो पार्टी भित्र जल्दा बल्दा शेर्पा युवाहरु हुनुहुन्छ । भर्खरै दोर्जी शशील शेर्पा , सोनाम छिरिङ शेर्पा , तथा आङदोर्जी शेर्पा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ । मैले त्यसो भनेको भए उहाहरु मेरो विरुद्ध मात्र होइन एमालेकै विरुद्ध जानुहुनेथ्यो त्यसकारण उहाहरुको एमाले प्रवेशले पनि त्यो झूठ सावित भएको छ मलाई झुठको खेती गर्नु छैन । काम गर्ने मानिस हुँ झूठको खेती गर्ने मानिस होइन ।
तपाइका योजना के छ समृद्ध सोलु निर्माणका लागि ?
पहिलो कुरा भ्रस्टचार मुक्त जिल्ला बनाउनु पर्छ । म त्यसलाई धेरै ब्याख्या गर्दिन । दोस्रो, बिभिन्न कुप्रथाको अन्त्य । जस्तो म प्रदेश सभाको सदस्य हुँदै गर्दा मेरो बिरुद्धमा लाग्ने सबैलाई समाप्त गर्ने प्रचलन छ, त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । यस्ता कुराहरुलाई परिवर्तन गरिनु पर्छ, बिकास निर्माणका कुरालाई पारदर्शिता ढंगबाट अगाडी बढाइनु पर्छ । जनताको सुखदुखमा साथ दिनु पर्छ । जनतालाई सदरमुकाम सम्म आउनका लागी सिधा बाटो जोडिनु पर्छ । आम जनताको आवश्यकतालाई बुझेर जिल्लाको समानुपातीक ढंगबाट बिकास गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ । हामी सोलुखुम्बु जिल्लालाई भ्रष्टचारी मुक्त जिल्ला बनाउन चहान्छौँ । समृद्ध जिल्ला बनाउनका लागि भ्रष्टचार उन्मुलन गर्न जरुरी छ । राजनीतिमा लागिरहदा मेरो आम्दानीको स्रोत मेरो पेसा नै हो । मलाई लाग्छ त्यसलाई पुर्ण रुपमा समाप्त पार्न सकिन्छ ।
तपाई प्रदेश सभा खको उमेदवार हुनुहुन्छ, तपाईको क्षेत्रमा बिश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा पनि छ यहाँ डाडाँ पारि लिखुपिके पनि छन् । ती क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न के ब्यबस्था छ ?
वास्तबमा मेरो क्षेत्र अन्तरगत लिखुपिके गाउँपालीका बिकासको हिसावले एकदमै पछाडि परेको क्षेत्र हो । भौगोलिक हिसावले लिखुपिक एक दमै दुर्गम गाउपालिका हो । लिखुपिकेबाट सदरमुकाम सम्म जोडिने सडक बिस्तार गर्नेछु । मैले लिखुपिकेको कार्यक्रममा पनि बोलेको छु । रामेछापको भण्डारदेखि लिखुको पुलसम्म आउने सडकलाई पुर्ण रुपमा सञ्चालन गरिने, र त्यसलाई सदमुकाम सम्म जोड्ने । एक बर्ष भित्रमा ट्रयाक खोलिने कार्य गरिने त्यसले गर्दा हिउँद महिनाहरुमा यो सडक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । त्यहाँको स्रोत साधनलाई त्यहीका जनातालाई समानुपातिक वितरण गर्ने पक्षमा मेरो जोड रहनेछ ।
बिगतको प्रबृत्ति हेर्ने हो भने निर्वाचनमा जनतालाई झुटा आश्वासन देखाउने तर त्यो पुरा नहुने, भएको छ नि ?
बिगत र अहिलेलाई तपाईले तुलना नगर्नुस् । तपाईले हामीलाई एक पटक मौका दिएर हेर्नुस् । हामीले अवसर पाउनु पर्छ । अवसर पाएपछि जनताले सँधैका लागि हामीलाई चिन्नेछन् । अर्काे खुम्बु पासाङलमुको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा त्यहाँको जिव स्तर अलि फरक छ । सदरमुकाममा पाउने बिभिन्न सेवा नपाएकोमा बिवाद नै छैन । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि अहिले सम्म त्यस क्षेत्रबाट कुनै उमेदवारको पहल भएन । कुनै दलहरुले पनि उमेदवार अगाडी सारेनन् । त्यसकारण अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातीक उमेदवार बनाइएको छ । मलाई लाग्छ हामी निर्वाचित भएपश्चात यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी बसेर दिर्घकालीन योजना बनाउँछौँ । यसैले त्यस क्षेत्रको जनताको आवाज बोल्नेछ । हामी जनतालाइ ढाट्न र झुक्याउन जान्दैनौँ ।
तपाई पनि एक सदरमुकाम बासी हुनुहुन्छ । तपाईलाई खुम्बुको पिडा के थाहा, अन्य ठाउँका पिडा के थाहा ? अनि कसरी हुन्छ समाधान ?
म सोलुखुम्बुको बिभिन्न ठाउँहरुमा पुगेको छु । त्यस ठाउँका जनताहरुसँग भेटघाट गरेको छु, त्यहाँका समस्याहरुको बारेमा छलफल गरेको छु । बिकास एकै पटक सम्भव छैन । हाम्रा बिभिन्न सडकहरुलाई स्तरोन्नती गर्न जरुरी छ । त्यस सडकको स्तरोन्नतीसँगै नयाँ सडकको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । यसैले जनताको समस्या समाधान हुनेछ । तर हाम्रा नेताहरु बिकासले एकै पटक चुली चुम्ने जनतालाई झुटा आश्वासन दिन्छन् तर हामी न कसैलाई सपना बाँड्छौँ, हामी त हुने कुरालाई मात्र बोल्दै आएका छौँ । नाम्चेका जनतालाइ एकैपटक गाडीको सहजता दिन सक्छौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, सिवुचेको जनतालाई हामी यो भन्न सक्दैनौँ । त्यसकारण बिस्तारै बिकासले फड्को मार्दै जाने हो ।
यी सबै कुरा त हिजो पनि दलहरुले नबोलेका होइनन्, उमेदवारले नबोलेका होइनन् तर पुरा चाँहि नगर्ने नै हो नी ?
जनताले बिश्वास गर्ने आधार छ । हामीले काम गर्ने अहिलेसम्म अवसर नपाएका होइनौँ केहि हदसम्म पाएका छौं । हिजो जिल्ला बिकास समितीमा हाम्रो नेतृत्व हुँदा हामीले गाउँगाउँमा कृषि सडक खोलेका छौँ, गाबिसहरुलाई स्तररोन्नती गरेका छौँ । त्यस बेलाको बजेटको स्थितीलाई हेर्ने हो भने धेरै काम भएका छन् । हामीले जे देख्छौँ त्यो बोल्छौँ । हिजोको नेता र हामीलाई तुलना नगर्दिन म आग्रह गर्छु ।
तपाईसँग युवाका लागि, दलितका लागि, महिलाका लागि, जनजातीका लागि के छ कार्यक्रम ?
पहिलो कुरा युवालाई स्वरोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरु अध्ययनमा जोड दिनु पर्छ भन्ने लाग्छ, युवा अध्ययन शिल भए पछि उहाँहरुले आफ्नो रोजीरोटी खोज्ने हो । युवा स्वरोजगार बन्नुमा युवा आफैँमा भर पर्छ । त्यस्तै महिलाहरुको हकमा हिजोको भन्दा महिला निक्कै माथि उठिसकेको अवस्था हो । अव महिलाहरुलाई राजनीतीक हिसावले अघि सार्न हामी तयार हुनुपर्छ । चुलो चौकाबाट माथि उठाएर हरेक कुरामा हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । वालबालीकाको हकमा वालमैत्री शिक्षाको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । उनीहरुलाई खेल खेल्नका लागि उचित ठाउँ निर्मान गर्ने, पुस्तकालयको बिकास गर्ने लगाएतका कार्य गर्ने । दलित र उत्पीडित जातीहरुको हकमा उहाँहरुलाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ । यसखालको कार्यक्रम गरियो भने सोलुखुम्बुमा महिला नेतृको कमी नहोला । उहाँहरुको पक्षमा काम गर्न म चाँहि तयार छु ।
युवाहरुलाई चाहिएको बेला परिचालन गर्ने अनि अवसर नपाएर युवा बैदेशीक रोजगारमा जानु पर्ने यो बाध्यता छ नी ?
त्यो हाम्रा कारण होइन भन्ने लाग्छ । युवा अध्ययनशिल भएर पनि बैदेशिक रोजगारमा गयो भने त्यो दुखद कुरा हो तर त्यसको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ युवा अध्ययनमा दख्खल राख्ने हुनु पर्छ । अर्काे अध्ययनमा कमजोरी भएका युवाहरुलाई बिभिन्न उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगार दिन सकिन्छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै परिचान गर्न र रोजगारिको सृजना गर्ने कुरामा मेरो कुनै कन्जुस्याइ हुनेछैन । यो सुरुवात मैबाट सुरु हुन्छ ।
भोली तपाई निर्वाचित भएर गएपछि तपाइले यो काम गर्नु भएन भने नि ?
म जिल्लामै हुन्छु । तपाईहरुले मलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि भेटेर भन्न सक्नुहुन्छ । एक पटक अवसर दिएर हेर्नुस् । अहिले नै संकाको दृष्टिले हेरीन जरुरी छैन । हेर्ने दृष्टिकोण पनि अव बदल्नुपर्छ । नराम्रो कामको नकारात्मक ब्याख्या गर्नेले राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्न सक्नु पर्छ । यो जिल्लामा राम्रो काम गर्ने पनि होलान् नी ।
तर जो जनताले निर्वाचित गरायो उनै जनतालाई हप्काउने नेताहरु छन् ।
अरु जे सुकै होस् तर म चाँहि जनतालाई हप्काउने पक्षमा छैन । पार्टी भित्र पनि कसैले नराम्रो काम गर्याे भने तपाईले यो नराम्रो गर्नुभयो भन्ने मेरो बानी छ । यो जनतालाई थाहा छ । राम्रो गर्योे या नराम्रो जनताले बुझ्ने कुरा हो ।
तपाईलाई जनताले भोट किन दिने ।
म सोलु जिल्लामा बसेर जनताको पक्षमा काम गर्ने एक ब्यक्ति । मैले संकटकाल देखि अहिले सम्म जनताकै काम गरेर जिल्लामा छु । म प्रतिबद्धता जनाउन चहान्छु, प्रदेश नं १ को राजधानी जहाँ हुन्छ त्यहाँ म एक पटक शेर्पाको बक्खु लगाएर सदनमा उपस्थित हुन्छु, अर्काे पटक यहाँको राईको फ्याँगा लगाएर उपस्थिती हुन्छु, तामाङको भेषभुषामा उपस्थिती हुन्छु । मेरो भनाई सबै जातजातीको भेषभुषामा त्यो संसदमा म उपस्थिती हुन्छु । म त्यो संसदमा सबै जातजातीको प्रतिनिधित्व गर्छु । शेर्पा भएर जित्नेहरु पनि यहाँ छन् नि तर कुनै दिन उहाँहरु बक्खु लगाएर संसदमा उपस्थित हुनु हुन्छ ? जे होस् हाम्रो जिल्लाको पहिचान म झल्काउनेछु । विकासलागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडी बढाउनेछु, सामूहिक छलफल गर्नेछु, जनतासँग अन्र्तक्रिया गर्नेछु र विकासलागि केन्द्रकै पहलकदमी लिएर काम गर्नेछु ।
बिभिन्न जातीहरुको भाषा लोप हुन लाग्यो भनेर उनीहरु आपत्ती जनउँछन् । त्यसको लागि तपाइको योजना के छ ?
यहाँ बिभिन्न जातजातीहरु छन् । बिभिन्न कारणले उत्पीडनमा परेका छन् । त्यसका लागि ती जातजातीहरुको बृद्धि बिकासका लागि संबिधानमा तोकेअनुसारको कार्य गर्नेछु । उहाँहरुको बिषेष संरक्षण गर्न हामी तयार छौँ । सबैलाई समान दृष्टिले हेरिनेछ । जनजातीको हकमा बिभिन्न कार्य गरिनेछ, थामी लगाएतका अल्पसंख्यकका लागि पनि कार्यक्रम ल्याइनेछ । उहाँहरुको उन्नतीका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याएर गर्न हामी तयार छौँ ।